10ka dhaqan ee ugu yaabka badan aduunka | Wararka Safarka
Lola curiel | | dhaqanka, General
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan ee safarka ayaa ah baro dhaqamada kale. In kastoo maanta, mahadsanid internetka, waxaan xiriir la leenahay gees walba oo meeraha ah, wali waxaan sii wadaynaa inaan la yaabno markaan la kulanno dhaqammo aad u kala duwan kuweenna. Qoraalkan waxaan kula wadaagayaa my liiska 10ka dhaqan ee ugu yaabka badan adduunka.
1 Tuf seddex jeer si aad sharka uga saarto
2 Jebi suxuunta
3.1 Maxaa Kanamara Matsuri ka dhigaya mid indhaha soo jiita?
4 Had iyo jeer wax ku cun gacantaada midig
6 Tartanka farmaajo rogid
7 Ha tabin
8 Naxashka sudhan
9.1 Asalka Tomatina
10 Maalinta Dhulka
Tuf seddex jeer si aad sharka uga saarto
Caadirradu waxay ka jiraan dhaqammada oo dhan. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuu leeyahay hababka looga hortago astaamaha xun. in Greece, qaar baa aaminsan in tuftu tahay dariiqa ugu fiican ee lagu eryo maIsaga iyo ayaandarro iyaga. Sidaa darteed, waxay leeyihiin caado la yaab leh oo ah inay tufaan saddex jeer markii qof war xun bixiyo. Nasiib wanaag, waxay soo saaraan oo keliya dhawaqa candhuuf. Waa dhaqan aan candhuuf lahayn!
In Aroosyada Giriigga waxaa jira dhaqankii hore ee jebinta suxuunta oo ah astaan ​​guur farxad leh. Aroosyada cusub iyo martida waxay suxuunta ugu tuuraan sagxadda dhulka si ay u garaacaan muusigga, maahan oo keliya inay dhiirrigeliyaan nolol guur ku qanacsan, laakiin sidoo astaanta faro badan. Aroosyadu maahan macnaha keliya ee aan ku arki karno dhaqankan gaarka ah, baabtiiska iyo wada-xaajoodka ka soo qaybgalayaashu waxay ugu dabaaldegaan farxaddooda sidan iyo adduunka muusigga iyo qoob-ka-ciyaarka. hab looga ilaaliyo fanaaniinta ruuxa sharka leh.
Maanta, dhaqankan ayaa ah mid laga tiro badan yahay dalka Giriigga waxaana lagu beddelay mid ka ammaan iyo fudeyd badan oo lagu nadiifiyo beddelidda Tuugista ubaxyada!
Kanamara Matsuri 2009, waxaa qaaday Takanori
Kanamara Matsuri Waa xaflad ka dhacda Kawasaki (Japan) goor hore bisha Abriil. Xisbigan Sahyuuniyadda ayaa bixiya gabbood taranka iyadoo ay ugu wacan tahay muhiimaddeeda dhaqan, bulsho iyo diineed, waxay soo jiidataa kumanaan dad ah oo ka kala yimid daafaha dalka sanad walba. Intaas waxaa sii dheer, in si gaar ah ay ka dhigtay a sheegasho dalxiis oo muhiim ah.
Maxaa Kanamara Matsuri ka dhigaya mid indhaha soo jiita?
Waxa ugu badan ee soo jiita indhaha shisheeyaha ayaa ah saddex meelood oo guska u eg oo jidadka ku dhex wareegaya, laba alwaax iyo macdan midab casaan ah leh. Wixii intaa dhaafsiisan, maalmahan gudahood macbadka Kanayama waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada macmacaanka, miraha iyo farxada gastronomic-qaabeeya phallus. Sidoo kale ma jiraan wax xusuus ah oo wakiillo u ah dhaqankan aan caadiga ahayn.
Had iyo jeer wax ku cun gacantaada midig
Hindiya iyo qaar Bariga Dhexe iyo wadamada Afrika gacanta midig waa qasab in la cuno waana in laga fogaadaa isticmaalka gacanta bidix. Sharcigan borotokoolka, oo ahmiyada koowaad ay umuuqato mid aad loola yaabo, wuxuu leeyahay sharaxaad macquul ah. Meelahan gacanta bidix waxaa loogu talagalay shaqooyinka la xiriira nadaafadda qofka, marka taabashada cuntada ama tusaale ahaan, in la yiraahdo hello si aad ah looma tixgeliyo. Waa la fahmi karaa, sax?
Eukokanto dhaqan ahaan sax maaha, laakiin waxay umuuqatay mid xiiso leh oo aan iska ilaalin karin inaan ku darno liiskayaga 10ka dhaqan ee aduunka ugu yaabka badan. Waxay ku saabsan tahay a cayaaraha Finnishka taas oo kaqeybgalayaashu ku tartamayaan labo-labo isku dhafan. Hadafka ugu dambeeya ayaa ah ninku wuxuu maareeyaa inuu maro waddo carqalad badan oo xaaskiisa la jiidanaysa waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Xaqiiqdii, ereyga "eukokanto" waxaa loo tarjumay Isbaanish sida Naagta sii wad.
In kasta oo tartamada Eukokanto ee hadda socdaa ay dhowaanahan yihiin, haddana isboorti wuxuu ka yimid Sonkajärvi, oo ah degmo ku taal Bariga Finland, oo sida muuqata waxay xididdadiisu qarnigii XNUMX-aad. Waqtigaas burcadda Rosvo-Rokainen ayaa ka shaqeyn jirtay aagga, sida ku xusan taariikhda maxalliga ah, tuuggu wuxuu qirtay oo keliya kooxdiisa kuwa awooda inay ku muujiyaan qiimahooda koorso carqalad xoog leh iyo, si hubaal ah halkaas, fikradda kulankaan oo horayba u jirtay wuxuu ku faafay dalal kale sida Sweden, Estonia ama Mareykanka. Xitaa waxaa jira qaabab kala duwan oo rarka ah, Tusaale ahaan Estoniyanka, afada ayaa foorarsata oo iyadu waa tan ninka ku qabata labadiisa garab garbaha iyada oo lugaheeda ku qabata oo dhexda qabsata.
El Sabtida ugu horeysa ee bisha Luulyo waxaa laga xusaa Sonkajärvi mid ka mid ah tartamada ugu caansan Eukokanto iyo abaalmarinta kuwa ku guuleysta waa mid u gaar ah sida ciyaarta lafteeda Waxay ku kordhaan miisaanka naagta ee biirka!
Tartanka farmaajo rogid
Oo sii wadida tartamada qalaad, waxaan u dhaqaaqnay Degmada Gloucester ee England. Isniinta ugu dambeysa ee May, lagu xusaa aaggan oo ku saabsan Dabaaldega farmaajo, oo ay ka qaybgalayaashu ku tartamayaan a tartan waalan si farmaajo u soo qabto Gloucester laga toogtay buurta dusheeda. Waxay umuuqataa hawl fudud, laakiin maahan, waxaa jira waxyaabo badan oo laqabto iyo farmaajo wuxuu gaari karaa 100 km / saacaddii. Xaqiiqdii, dhicitaanada iyo dhaawacyadu waa soo noqnoqdaan inta lagu jiro tartanka waxaana had iyo jeer jira koox caafimaad oo diyaar u ah inay daryeesho dhaawacyada.
Asalka ciida wuxuu soo bilaabmay sanadkii 1836In kasta oo 1826 warqad loo diray war-bixiyaha magaalada ee Gloucester horeba loogu sheegay dhacdadan, way adagtahay in si dhab ah loo ogaado sida fikraddu ku timid oo xitaa waxaa jira kuwa la xidhiidha iid jaahili hore.
Caadada foorarsiga ayaa horay ugu baahday adduunka oo dhan, waxaa jira xitaa dalal, sida Chile, oo boqolkiiba dheeraad ah oo adeegga ah lagu daro biilka makhaayadda, in kasta oo hadhow macmiilku dooran karo inuusan bixin. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha, marka laga reebo Hong Kong iyo Macau, ma aha wax aad u badan in la tabto.
Dhaqankani wuxuu noqday mid caadi ah, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn, laakiin meelo badan oo dalka ka mid ah in qaar ka mid ah qadaadiicda miiska lagaga tago wax lala yaabo dadka waddanka u dhashay, gaar ahaan haddii aad booqato meelaha aan u dalxiis badnayn. Taksiilayaasha ayaan badiyaa la tilmaamin, inkasta oo aysan waxba dhicin haddii aad iyaga siiso qayb ka mid ah isbeddelka.
Dhaqankan aaska u gaarka ah Kaliya waxay ka jirtaa meelaha qaar ee Filibiin, Shiinaha iyo Indooniisiya. Shiinaha dhexdiisa, waxaa caadi ka ah kaliya qowmiyadaha qaarkood, sida dadka Bo ee gobolka Yunan. Aaggan, Naxashku waxay sudhan yihiin dogobbo alwaax ah ku dhegan wajiyada buuraha. Waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku saabsan asalka dhaqankan, waxaa la sheegay inuu ahaa nooc ka mid ah ka ilaali xayawaanku inay qaataan meydadka, laakiin sidoo kale waa hab ka mid ah nafta u ducee dadka dhintay, sida uu aaminsan yahay Bo, buuruhu waa jaranjaro samada loo maro oo aad sare loo dhigo ayaa wadada u sahlaysa qofka dhintay.
En Filipinas Naxashyo sudhan ayaa ku jira Jasiiradda Luzon, gudaha Dhagaxyada Sagada, oo ah deegaan ay degan yihiin qowmiyadaha tirada yar ee Igorot. Maaddaama ay rumeysan yihiin waxay farayaan, oo meydka la sarraysiinayo waxay ka caawisaa inay jannada galaan, halka ay ilaahyadooda degan yihiin. Dhaqanku waa kaas naxashka waxaa nolosha ku sameeya isla qofka qabsan doona, iyada oo la adeegsanayo jajabka geedka kaas oo daboolka alwaax markaa lagu daro.
Sawir waxaa qaaday Mike Jamieson
La Tomatina waa a xaflad lagu qabtay Buñol (Valencia) Arbacadii ugu dambeysay ee Ogosto, inta lagu gudajiray damaashaadka. Dhexdeeda, ka qaybgalayaashu waxay la dagaallamaan a dagaal yaanyo dhab ah Sawiradu waa wacdaro! Yaanyada la tuurayo waxay ka yimaadeen Xilxes (Castellón) waxaana loo koray gaar ahaan xafladda, maadaama dhadhankoodu aanu fiicnayn.
El asalka Caadadan cajaa’ibka ahi waxay soo bilaabatay sano 1945 waana wax lala yaabo. Intii lagu guda jiray dhoolatus Rafaa iyo madax waaweyn (mid kale oo ka mid ah dhacdooyinka sii socda in la qabto inta lagu jiro ciidaha), koox ka mid ah asxaabta ayaa isku dayay inay ka dhex helaan ka soo qayb galayaasha. Waxay ku sameeyeen dhiirigelin sidan ah waxay toogteen mid kamid ah kaqeybgalayaasha taasi oo dhulka ku dhacday iyadoo garaacaysa wax kasta oo hareeraheeda ah. Agagaarka Fagaaraha waxaa ku yaalay khudaar iyo qaarkood waxay bilaabeen inay tuuraan yaanyo. Si tartiib ah dadku wuu ku dhacay oo waxay ku biireen dagaalka. Sannadkii ku xigay, dhallinyartii wax walba bilaabay, way ku celiyeen, inkasta oo markan ay yaanyada ka qaateen gurigooda. Sanado kadib dhaqankani wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan Spain. Xaqiiqdii, 2002 ayaa lagu dhawaaqay Xisbiga caalamiga ah ee xiisaha dalxiiska by Xoghaynta Guud ee Dalxiiska.
Maalinta Dhulka Waxaa looga dabaaldegaa Mareykanka iyo Kanada oo waxaa laga ogaadey adduunka oo dhan mahadnaqa movie waqtiga qabsaday (1993), oo jilaya Bill Murray. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo inbadan oo ka mid ahi aqoonsadaan muuqaalada filimka, haddana qof walbaa ma garanayo asalka iyo macnaha dhaqankan wuxuu xirayaa liiskayaga 10ka dhaqan ee aduunka ugu yaabka badan.
Dhaqankan asal ahaan ka soo jeeda Punxsutawney, magaalo yar oo ka mid ah Pennsylvania, dhamaadka Qarnigii XNUMXaad, sida loo maro saadaalinta imaanshaha jiilaalka. Tan iyo markaas, Febraayo 2, magaalada waxaa soo buux dhaafiyay warbaahinta iyo dadka waxay u tegayaan inay arkaan dhulka hoostiisa ee Phill, masuulka ka ah hawshan. Isla maalintaas xayawaanku wuxuu ka baxayaa godkiisa isagoo diyaar u ah inuu bixiyo saadaal, haddii ay tahay maalin daruuro iyo Phill ma arko hooskiisa, burrow ka tag wuxuuna ku dhawaaqayaa in gu'ga uu dhowaan soo socdo. Taas lidkeeda, haddii qorraxdu soo baxdo iyo Phill wuxuu arkaa hooskiisa, wuxuu u noqon doonaa inuu magan galo digniin ah in jiilaalka uu socon doono lix toddobaad oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 10ka dhaqan ee ugu yaabka badan aduunka